WhatsApp को लागि मध्य औंला इमोजी कसरी पाउने आईफोन समाचार
यस समयमा, र हामीलाई थाहा छैन कहिलेसम्म, एप्पलले हामीलाई यो प्रयोग गर्न दिदैन मध्य औंला इमोजी कुनै अनुप्रयोगमा छैन। उनीहरूले यो सोच्नु पर्छ कि यो जोड्न अशिष्ट इशारा मात्र हो, यद्यपि प्रायजसो समय हामी यसलाई हाम्रा साथीहरूसँग एक मजाकको रूपमा प्रयोग गर्दछौं। "कंघी" इमोजी आइकन हो जुन प्रयोगकर्ताहरूले सब भन्दा बढी अनुरोध गरेको थियो तर स्पोक इमोजीसँगै, एप्पलले यसलाई थप्नको लागि अहिलेसम्म डेनडेन गरेको छैन। जे भए पनि, त्यहाँ प्राप्त गर्नका लागि एक तरीका छ, यो क्षणको लागि केवल व्हाट्सएप च्याटमा काम गर्दछ.
यसलाई प्राप्त गर्ने विधि स्पोक इमोजी प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएको जस्तै छ, भिन्न भिन्नताको बीचमा औंला इमोजी उपलब्ध छ व्हाट्सएप वेब संस्करण। यदि तपाईं आफ्नो सम्पर्कहरू पैदल यात्राको लागि पठाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्नेछ।
हामी जाँदै छौं web.whatsapp.com हाम्रो कम्प्युटरबाट।
हामी कुराकानी खोल्छौं।
हामी इमोजी आइकनमा ट्याप गर्दछौं, मध्य औंलाको लागि हेर्नुहोस् र त्यसलाई पठाउनुहोस्।
आईफोनबाट हामी यो च्याट खोल्छौं जुन हामीले यसलाई पठाएका थियौं र मध्य औंलाको इमोजी प्रतिलिपि गर्नेछौं।
हामी सेटिंग्स / सामान्य / कीबोर्ड / द्रुत प्रकार्यहरूमा जान्छौं।
हामी जोड चिन्ह (+) मा छुन्छौं।
हामी इमोजी टाँस्यौं र छिटो प्रकार्य थप्यौं जुन हामी ईमोजी सुरु गर्न लेख्नेछौं।
हामी बचत छुन्छौं।
हामीले बचत गर्न चाहेका सबै र for्गहरूको लागि प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
यसलाई प्रयोग गर्न तपाईले भर्खरै व्हाट्सएप च्याटमा द्रुत प्रकार्य लेख्नु पर्छ। जस्तो तपाईले देख्नुहुनेछ, यो लेख्दा अनौठो प्रतीकहरू देख्न सकिन्छ तर जब तपाइँ यसलाई पठाउनुहुन्छ, यो डिकोड र पूर्ण रूपमा आउँछ। नकारात्मक पक्ष यो हो कि यो अरू कुनै पनि अनुप्रयोगसँग उपयुक्त छैन तर हामी एप्पललाई स्वदेशी रूपमा थप्न पर्खिरहेका छौं, केही कुरा केहि हो। कम्तिमा व्हाट्सएपबाट हामी हाम्रा साथीहरूलाई पठाउन सक्छौं र यती साथीहरूलाई सवारीका लागि पठाउँदैनौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » बीचको औंला इमोजी कसरी व्हाट्सएपको लागि प्राप्त गर्ने
योगदानका लागि धन्यवाद, तर मैले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरें, र मेरी केटीले दुई दुर्लभ प्रतीक पाउँछिन्, हाहाहा, धन्यवाद good
मैले सबै कुरा दोहोर्याएको छु र यसले पहिले नै उत्तम काम गर्दछ, यो ईमोटिकनको नक्कल गर्दा मैले केहि गलत गरेको देख्न सकिन्छ। मलाई थाहा छ कि यसले काम गर्छ कि उत्तरबाट जुन मेरो केटी हाहाहाबाट आएको छ। धन्यवाद।
म्याक्रोन पत्र भन्यो
फर्नान्डो, तपाईंको केटीले भर्खरको संस्करण २.१२..2.12.6 मा व्हाट्सएप अपडेट गर्नुपर्नेछ, एक पटक उसले यो गरेपछि उनले बीचको औंला देख्न सक्नेछिन !! आलिंगन!
म्याक्रोनकार्टालाई जवाफ दिनुहोस्
केवल एउटा चीज, "मध्य औंला" को नाम, मुटु छ, वा त्यसैले मलाई लाग्छ
Jot लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार jot मलाई थाहा छ त्यस औंलालाई के भनिन्छ, तर यो "मध्य औंला" प्रतिमा होइन। यसमा अन्य नामहरू पनि राख्नु हुँदैन जुन म। "Atpc" अक्षरको साथ मेरो आह्वान गर्दछ, तर त्यो सार्वजनिक वेब पृष्ठमा राम्रो देखिदैन।
म भन्छु यो गर्छु तर यो मलाई लाग्छ ईमोजी सर्टकटमा थप्न सकिदैन।
यो मेसेन्जरमा जाँच गर्नुहोस्
उत्कृष्ट !!! यसले मेरो लागि पहिलो पटक काम गर्यो
धनीलाई जवाफ दिनुहोस्